जब विज्ञापन समाचार बन्छ र समाचार विज्ञापनः एक उदाहरण – Media Kurakani
June 4th, 2015 Rabi Raj Baral Feature Stories
पत्रपत्रिका हेर्नुस् कि समाचार देखिन्छ कि विज्ञापन। लेख पनि हुन्छन्, त्यसको कुरा नगरौँ।
समाचार र विज्ञापनमा के फरक हुन्छ त्यसको चर्चा पछि गरौँला। आजको कुराकानीको विषय हो- के विज्ञापन समाचार बन्न सक्छ अनि समाचार विज्ञापन बन्न सक्छ?
आज (२०७२ जेठ २१ गते बिहीबार) कान्तिपुरमा छापिएको एउटा विज्ञापनलाई उदाहरण मान्ने हो भने समाचार विज्ञापन बन्न सक्छ। समाचार विज्ञापन बन्न सक्छ भने विज्ञापन समाचार बन्न नसक्ने कुरै भएन।
तिलक पोखरेलको ट्विट हेर्नुस्।
समाचार चाहिँ कारोबार, नागरिक, अन्नपूर्ण र समाचारपत्रले छापेछन्। त्यहि ‘समाचार छापियो’ भन्ने विज्ञापन चाहिँ कान्तिपुरमा pic.twitter.com/rtxiXTfaRb
— Tilak Pokharel (@tpokharel) June 4, 2015
यो विज्ञापनमा चेल्सी इन्टरनेसनल एकेडेमी नामको कलेजका बारेमा विभिन्न दैनिक पत्रिकामा छापिएका समाचार शोर्षकको कटिङ राखिएको छ। कारोबार दैनिक, नागरिक दैनिक, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक र नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा विभिन्न मितिमा यो कलेज उत्कृष्ट भएको भन्दै ‘समाचार’ छापिएको रहेछ।
त्यही समाचार छापिएको विज्ञापन आज कान्तिपुरमा छापिएछ। पहिला समाचारलाई ‘स्पोन्सर’ गर्‍यो अनि छापिएपछि त्यसैलाई विज्ञापन गर्‍यो। अनि भएन त विज्ञापन समाचार र समाचार विज्ञापन? माथिको ट्विटमा अनमोलमणिको रिप्लाइ पढ्नुस्।
@tpokharel खासमा ती सबै विज्ञापन हुन्, कुनै पनि समाचार होईनन्। विज्ञापनलाई समाचारको भ्रम बनाएर अर्को विज्ञापन वनाईदिए @siromanid #Jrnlsm#Add
— Anamol Mani (@anamolmani) June 4, 2015
Tags Advertising Paid News
पत्रकारिताः पैसा, प्रश्न र पीडा »
« प्रतीक प्रधान प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार नियुक्त